अँध्यारो सुरुङमा देश फस्यो, यसबाट सहजै निस्कन गाह्रो छ : बाबुराम भट्टराई - Nepal's No.1 News portal
अँध्यारो सुरुङमा देश फस्यो, यसबाट सहजै निस्कन गाह्रो छ : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं-पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली गणतन्त्रविरोध भएको आरोप लगाएका छन्। जसपाको काठमाडौंमा जारी सरकारविरुद्धको प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्।
पहिलेदेखि नै ओली गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी भएको उनले उल्लेख गरेका छन। उनले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै यसको प्रतिकारमा उत्रिन सबैसँग आग्रह गरेका छन।
ओलीले राज्यका सबै अंग क्रमशस्कब्जा गर्दै लगेको र विभिन्न निकायबाट आफ्ना मान्छे टिपेर नियुक्त गरेको समेत आरोप लगाएका छन। संसद विघटन गर्ने, चुनाव घोषणा गरेको नाटक गर्ने अनि मन्त्रिपरिषद‍् विस्तार गर्ने, उनले प्रश्न गर्दै भने, त्यो मिल्छ, कतै मिल्छ ?
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसदन विघटन गरेको स्मरण गर्दै भट्टराई भने, मेरै पालामा पनि संसद विघटन हुँदा ९ महिनासम्म सरकारमा रहेँ। १२ वटा मन्त्रालय खाली थियो। तर मैले कुनै पनि मन्त्री थपिन। बरु भएकै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। नयाँ मन्त्री थप्न नैतिकताले मिल्दैनथ्यो,मिल्दैन पनि।
ओलीमा आफूले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अहंकारले अँध्यारो सुरुङमा देश फसेको भन्दै भने,अँध्यारो सुरुङमा देश फस्यो, यसबाट सहजै निस्कन गाह्रो छ। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहलाई संयुक्तरुपमा आन्दोलनमा होमिन आग्रह गरेका छन।